I-Admissions Yakho Yemfundo kunye neeKholeji zeeKholeji
Yiyiphi Ingxelo Efanelekileyo Yezemfundo Yee-College Admissions?
Icandelo elibaluleke kakhulu kwiKholeji yakho.
Phantse zonke iikholeji neeyunivesithi ziqwalasela irekhodi elihle lezemfundo ukuba libe yinxalenye ebaluleke kakhulu yesicelo sokwamkelwa esiqinileyo. Ingxelo efanelekileyo yezifundo, nangona kunjalo, malunga nama-grade. Uluhlu olungezantsi luxoxa ngezinye zeempawu ezibalulekileyo ezihlula irekhodi elihle lezemfundo kumntu obuthathaka.
AmaBanga amaBakala aBakhulu
Ryan Balderas / Getty Izithombe
Ukuze ungene kwikholejini eliphezulu okanye kwiyunivesiti ephezulu , unokulungele ukuba nencwadi ebhalwe ngokuyinxalenye 'yeA. Qaphela ukuba iikholeji abaqhelekanga ukujonga amabakala anzima - baya kuqwalasela amabanga kwi-scale ye-4.0 engapheliyo. Kwakhona, iikholeji ziza kuphinda zihlaziye i-GPA yakho ukuba iqwalasele iikhosi zezemfundo eziphambili kuphela ukuze i-GPA yakho ingakhuselekanga nezifundo ezifana nokuzivocavoca, i-chorus, umdlalo okanye ukupheka. Funda ngakumbi kweli nqaku malunga namaGPA anzima .
Umgangatho opheleleyo weZifundo ezingundoqo
Iimfuno ziyahluka ukusuka kwikholejini ukuya kwikholeji, ngoko qi niseka ukuba uphando iimfuno zesikolo ngasinye osifaka kuso. Ngokubanzi, nangona kunjalo, iimfuno eziqhelekileyo zinokubonakala ngathi: iminyaka engama-4 yesiNgesi, iminyaka emithathu yemathematika (iminyaka engama-4 iphakanyisiwe), iminyaka emi-2 yembali okanye isayensi yoluntu (iminyaka emithathu iphakanyisiwe), iminyaka emi-2 yesayensi (iminyaka engama-3 iphakanyisiwe), Iminyaka emi-2 yolwimi lwangaphandle (iminyaka emithathu iphakanyisiwe).
Ukuba isikolo sakho esiphakeme sinika iiklasi eziphambili zokubeka, iikholeji ezikhethiweyo ziya kufuna ukubona ukuba uthathe le zifundo. Awudingi ukuba ungaphezulu xa isikolo sakho sinikeza izifundo ezininzi ze-AP, kodwa kufuneka ubonise ukuba uthatha izifundo ezicelomngeni. Impumelelo kwiiklasi ze-AP, ngokukodwa ekufumaneni i-4 okanye yesi-5 ekuhlolweni kwe-AP, yindlela enamandla kakhulu yokwenza kwakho kakuhle eklasini. Kaninzi "
KwiiKlasi zeBaccalaureate zamazwe ngamazwe
Njengamaziko e-AP, iikholeji ze- Baccalaureate zamazwe ngamazwe (IB) zikhupha izinto zokufunda ezikwinqanaba lekholeji kwaye zilinganiswa ngovavanyo oluqhelekileyo. Iikhosi ze-IB ziqheleke kakhulu eYurophu kunezo zonke iUnited States, kodwa zithandwa kakhulu e-US Izifundo ezigqibeleleyo ze-IB zibonisa iikholeji ukuba uthatha iiklasi ezinzima kwaye ulungele umsebenzi weekholeji. Basenokufumana imali yekrektri.
Imibeko kunye nezinye iiKlasi ezikhawulezileyo
Ukuba isikolo sakho singaniki iiklasi ezininzi ze-AP okanye ze-IB, ngaba lifundisa ngeeklasi zokuhlonipha okanye ezinye iiklasi ezikhawulezayo? Ikholejini ayiyi kuhlawulwa ngenxa yokuba isikolo sakho asiboneli ngezifundo ze-AP, kodwa ziya kufuna ukubona ukuba uthathe iikhosi ezinzima kakhulu ezikhoyo kuwe.
Iminyaka emine yoLwimi lwangaphandle
Iikholeji ezininzi zidinga iminyaka emibini okanye emithathu yolwimi lwangaphandle, kodwa uya kukhangeleka ngakumbi xa uthatha iminyaka emine epheleleyo. Iikholeji zeeKholeji zigxininisa ulwazi oluthe xaxa nangaphezulu, ngoko amandla ngolwimi aya kuba yinto enkulu kunye nesicelo sakho. Qaphela ukuba iikholeji ziza kuba zibona ubunzulu ngolwimi olunye kunokubetheka kweelwimi eziliqela. Kaninzi "
Iminyaka emine yeMathematika
Njengoko kulwimi lwangaphandle, izikolo ezininzi zifuna iminyaka emithathu yemathematika, kungekhona ezine. Nangona kunjalo, amandla emathematika athabathekisa abantu abamkeleyo. Ukuba unethuba lokuthabatha iminyaka emine yezibalo, ngokubaluleka ngokubala, irekodi yakho yesikolo esiphakamileyo iya kuba yinto ephawulekayo ngakumbi kunomfaki sicelo oye wagubungela ubuncinane. Kaninzi "
College College okanye iiKlasi zeeKholeji ze-4
Ngokuxhomekeke kwindawo ohlala kuyo kunye nokuba yiyiphi imigaqo-nkqubo yesikolo sakho esiphakamileyo, unokufumana ithuba lokuthatha iiklasi zasekholejini xa ufunda esikolweni esiphakeme. Ukuba unako ukuthatha ukubhala kwikholeji okanye iklasi yamatriki ngelixa esikolweni esiphakeme, izibonelelo zininzi: uza kubonisa ukuba unako ukulawula umsebenzi wezinga lekholeji; uya kubonisa ukuba uyakuthanda wena; kwaye uya kufumana i-credit ekrejini engakunceda uphumelele ekuqaleni, iimbini ezinkulu, okanye uthathe iiklasi ezikhethwayo.
Iiklasi zeMatriki eziMandla
Iikholeji aziyi kubona amanqaku akho okugqibela ukusuka kunyaka wakho ophezulu kude kube emva kokuba benze isigqibo malunga nokumkelwa kwakho, kodwa bafuna ukubona ukuba uyaqhubeka ucela umngeni kwi- grade 12 . Ukuba ishedyuli yakho yonyaka ophakamileyo ukhombisa ukuba ulahla, oko kuya kuba yisiteleka esikhulu kuwe. Kwakhona, ukuthatha izifundo ze-AP ne-IB kwibanga lesi-12 kunokufumana inzuzo enkulu xa ufika kwikholejini.
Abanye abaselula bachaza indlela yokuba ngumfundi onokumgangatho ophakathi kwinqanaba eliphakamileyo. Nangona ama-grade aphantsi kumntu wakho omtsha kunye neminyaka engama- sophomore uya kuphazamisa isicelo sakho, abayi kumaza amanqaku amanqanaba aphantsi kumanqanaba akho aphezulu kunye nabadala. Iikholeji zifuna ukubona ukuba izakhono zakho zemfundo ziphucula, kungekhona ukuhla.
I-Adopho Year and College Admissions: Ixesha lokugqibela
6 Iingcamango malunga neekholeji zeeKholeji
UNicholas ubeka iifilimu
Impendulo eqhelekileyo Impendulo emfutshane I-Essay kwi-Entrepreneurship
Umsila woMlingo kunye neNkcubeko
IsiNgesi esisisiseko sesiKhokelo soLwimi oluPhambili 4